Serivisy | GIS
Fanontam-pirinty sy famoahana, serivisy fampahalalana momba ny fahazoana orinasa, serivisy fanatsarana teknolojia, consulting matihanina, fanaraha-maso ny injeniera, famolavolana injeniera, fampandrosoana ary famolavolana ny teknolojian'ny fampahalalana sy ny rindrambaiko fitantanana ny fampahalalana, ny fikojakojana, ny fiantohana, ny fanofana, ny fikojakojana sy ny fiantohana ny fitaterana, ny fihaonana, ny fampiofanana, fitantanana fananana sy serivisy hafa.
Fomba fiasa amin'ny faneken'ny governemanta
1. Ny mpanjifa dia manangana ekipa mpanara-maso ny fanekena mba hanazavana ilay olona manokana miandraikitra sy hanao sonia fifanekena ankolafy fahatelo ho an'ny tetik'asa fametrahana ny governemanta.
2. GIS manangona ny vaovao momba ny fanekena, ary manao ny fandaharan'asa fanekena ankolafy fahatelo nataon'ny injeniera teknika.
3. Ny GIS manolotra injeniera momba ny kalitao matihanina mba hanao fisafoana an-toerana, na koa mety hiaraha-miasa miaraka eo an-toerana miaraka manamarina sy manome alalana ny mpamatsy, mpividy ary GIS.
4. Ny GIS dia mandrindra ireo manampahaizana anatiny mba hanamarina miaraka sy hamoaka ireo tatitra momba ny faneken'ny antoko fahatelo.
Manampy amin'ny fanekena ny fangatahan'ny governemanta GIS
Ho valin'ny ny fitsipika No. 87 ao amin'ny Ministeran'ny Fitantanam-bolan'ny Repoblika Entim-bahoakan'i Shina, ny lalàna mifehy ny fitantanana ny entan'ny governemanta sy ny serivisy amin'ny alàlan'ny fanolorana sy fandefasana, General Inspection Services Co., Ltd dia manangana teknolojia fitsapana sy hery fisavana. elektronika, haino aman-jiro, indostria simika, milina ary teknikan'ny Metrolojia, ary manolo-tena hamolavola ny fanekena eken'ny antoko fahatelo ho an'ny fametrahana ny governemanta mba hiantohana ny kalitao ho an'ny tetik'asa fahazoana ny governemanta, ary koa ny fizotran'ny famerenam-panjakana tonga lafatra, ary avy eo manatsara ny fahitsiana manara-maso ny ny dingana ho an'ny governemanta.
Fanombohana voalohany, Amin'ny fizahana fizahana, Famakafakana trano, fanaraha-maso amin'ny , Fanaraha-maso feno amin'ny Internet, Fandraisana ny fanaraha-maso,